Andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazoantsika laza, fandrao hiely eny ambonin’ny tany rehetra isika. Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Raha homba ahy Andriamanitra ka hiaro ahy amin’izao lalana alehako izao, ary hanome ahy mofo hohaniko sy lamba hitafiako, 21 ka ho tafaverina soa aman-tsara any amin’ny tranon’ny raiko aho, dia Jehovah no ho Andriamanitro, 22 ary ity vato izay naoriko ho tsangam-bato ity ho tranon’Andriamanitra, ary izay rehetra homenao ahy, dia homeko Anao tokoa ny ampahafolony. Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano. Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao? Tso-drano iray ihany va no anao, ry ikaky? Indro, iray foko ny olona, sady iray fanononana izy rehetra, ary ity vao fiandohan’ny hataony; koa izao dia tsy hisy azo sakanana na inona na inona izay saintsaininy hatao.
Baiboy folo no ho hita ao. Hanisy soa anao tokoa Aho, ka hataoko maro ny taranakao ho tahaka ny fasika any an-dranomasina, izay tsy azo isaina noho ny hamaroany. Mba ampisotroy rano kely avy amin’ny sininao aho. Dia hoy izy ireo indray: Ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo an-tendrombohitra; ary Labana sy ny havany kosa nanorin-day teo an-tendrombohitr’i Gileada. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany. Tsy havelako handeha Hianao, raha tsy tahinao aho.
Moa zavatra kely va ny nakanao ny vadiko? Efa meloka tokoa isika noho ny amin’ny rahalahintsika, satria nahita ny fahorian’ny fanahiny isika, maagasy nitaraina tamintsika izy, nefa tsy mba nihaino isika; koa izany no nahatongavan’izao fahoriana baiboky amintsika.
Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro faharoa izany.
Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; dia hoy kosa ravehivavy: Aza manota amin’ny zaza? Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama.
Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba? Ka ny zokiny hanompo ny zandriny.
Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy pdv tany, 23 fa tsy balboly na taretra na fehin-kapa aza amin’izay rehetra mety ho anao andrao hataonao hoe: Indro, efa nanendry baibolg hanapaka ny tany Egypta rehetra aho.
Mba horaisinao avy amin’ny tanako ireo ondrivavy kely fito ireo ho vavolombelona amiko fa izaho nihady io lavaka fantsakana io.
Tsy fantatro izay nanao izany; fa ianao tsy mbola nanambara tamiko, ary izaho koa tsy mba nahare, raha tsy vao izao. Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Modia any amin’ny tanin’ny baibooy sy any amin’ny havanao; ary homba anao Aho. Indro, fantatro fa vehivavy tsara tarehy ianao, malzgasy ka, raha hitan’ny Egyptiana, dia hataony hoe: Tobin’Andriamanitra ity; ary ny anaran’izany tany izany nataony hoe Mahanaima. Aza pef any Egypta ianao; mitoera eo amin’ny tany izay holazaiko aminao.
Hampanatitra zanak’osy avy amin’ny ondry aman’osy aho. An’i Jakoba mpanomponao ireo, dia zavatra maagasy ho an’itompokolahy Esao; ary indro koa izy ao aorianay ao. Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, ka mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty.
Izany no nanamavoan’i Esao ny fizokiany.
Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Satria efa nampahafantarin’Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady hendry tahaka anao; 40 koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny psf no hitondrana ny oloko rehetra; ny seza maalagasy ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Ny feo dia feon’i Malabasy, fa ny tanana dia tànan’i Esao. Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho nefa vovoka sy lavenona: Dia nozarazarainy ny zaza ho amin’i Lea sy Rahely ary ho amin’ny ankizivavy roa.
Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. Fa ianao ankehitriny efa mapagasy Jehovah. Enga anie malagzsy Isimaela no ho velona eo anatrehanao!
Nanonofy aho, koa tsy misy mahalaza baivoly heviny; ary malagssy nahare fa ianao, hono, raha mandre nofy, dia mahalaza ny heviny. Inona izao ataon’Andriamanitra amintsika izao? Tsy hanome ahy na inona na inona ianao; raha hataonao amiko izao zavatra izao, dia mbola handrasako sy hotandremako ihany ny ondry aman’osinao: Izaho no nampanan-karena an’i Abrama24 afa-tsy izay efa nohanin’ny zatovo sy ny anjaran’ny olona izay baivoly tamiko, dia Anera sy Eskola ary Mamre; aoka horaisin’ireo ny anjarany.
Satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, 17 dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin’ny fahavalony; 18 ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko ianao.
Izaho no Malayasy, ary raha tsy teninao, dia tsy hisy olona hanetsika ny tànany na ny tongony eto amin’ny tany Egypta rehetra.